Mitrakà fa Mbola Miova ny Fiainana
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bengali Bichlamar Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Goujrati Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kariba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Nhengatu Norvezianina Népali Oromo Ourdou Pendjabi Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ayacucho) Romanianina Rosianina Samoanina Sateré-Mawé Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Xhosa Zoloa Éwé
Satria Mbola Miova ny Fiainana
“Voageja amin’ny lafiny rehetra izahay, nefa tsy hoe tery loatra ka tsy afa-mihetsika. Very hevitra izahay, nefa tsy hoe tsy misy lalan-kivoahana mihitsy.”—2 KORINTIANINA 4:8.
Na tena hoe lehibe aza ny olana mahazo anao, dia tafahoatra loatra ny mamono tena. Azo oharina amin’ny olona marary andoha izany, ka ny tendany mihitsy no tapahiny mba tsy hiverina intsony ilay aretina. Tadidio fa na ny olana heverinao fa tsy ho voavaha mihitsy aza, tsy voatery hitohy foana. Mety hiova tsy araka ny nieritreretanao azy ilay izy.—Jereo ilay efajoro hoe “Niova ny Fiainan’izy Ireo.”
Ahoana anefa raha mbola tsy miova ny fiainana? Ny androany aloha eritreretina. Hoy i Jesosy: “Aza manahy mihitsy ny amin’ny ampitso, fa ny ampitso hanana ny fanahiany. Ampy ho an’ny andro tsirairay ny ratsy mitranga eo aminy.”—Matio 6:34.
Ary ahoana raha tsy azo ovana mihitsy ny zavatra iainanao, ohatra hoe manana aretina mitaiza ianao, na nisara-bady, na maty ny olona tena tianao?
Na izany aza, dia ny toe-tsainao mbola azonao ovana. Miezaha aloha hanaiky hoe efa izay ny zava-misy, ary amboary ny sainao mba hifantoka amin’ny zavatra tsara. (Ohabolana 15:15) Raha manao an’izay ianao dia ho vonona hitady fomba hiatrehana an’ilay izy, fa tsy tonga dia hieritreritra hoe ny fahafatesana no vahaolana. Tsy hahatsiaro loatra ianao amin’izay hoe tsy afa-manoatra.—Joba 2:10.
TADIDIO IZAO: Iakarana tsikelikely ny tendrombohitra fa tsy vita indray mandingana. Azonao vahana tsikelikely koa ny olana mahazo anao, na dia toa ngezabe hoatran’ny tendrombohitra aza.
IZAO ATAO ANDROANY: Miresaha amin’ny namanao akaiky na ny mpianakavinao, ka lazao izay manjo anao. Mety ho afaka hanampy anao mantsy izy mba hahita fa mbola misy azo atao.—Ohabolana 11:14.
NIOVA NY FIAINAN’IZY IREO
Ireto misy olona efatra nanam-pinoana, tantarain’ny Baiboly. Nisy fotoana izy ireo kivy be, ka tsy te ho velona intsony.
Rebeka: “Raha izao no izy, nahoana re aho no mbola velona ihany e?”—Genesisy 25:22.
Mosesy: ‘Vonoy mihitsy aho, ka aza avela hahita fahoriana.’—Nomery 11:15.
Elia: ‘Esory ny aiko, fa tsy tsara noho ny razako aho.’—1 Mpanjaka 19:4.
Joba: “Nahoana re aho no tsy maty hatrany am-bohoka e?”—Joba 3:11.
Vakio ao amin’ny Baiboly ny tantaran’ireo olona ireo, dia ho hitanao hoe nihatsara ny fiainany fa tsy araka ny nanampoizany azy. Mety mbola hiova koa ny fiainanao. (Mpitoriteny 11:6) Mitrakà fa aza kivy!
Mitrakà fa Misy Afaka Manampy Anao
Misy zavatra telo afaka manampy anao tsy hamoy fo tanteraka.
Hizara Hizara Satria Mbola Miova ny Fiainana